शेखर गुप्ता बुधबार, कात्तिक २४, २०७८ मा प्रकाशित
एकछिन दिक्कलाग्दो राजनीतिबाट टाढा सरेर फिल्मको कुरा गरौं र आफ्नो पेशा पत्रकारिताबारे केही ठट्टा गरौं । आजकालका सम्पादकहरु ‘नटग्राफ’ माग्छन्, मतलब पुरै लेखको सार पहिलो अनुच्छेदमै । सोही अनुसार नटग्राले यो प्रस्तुत गरेको छ- बलिउड र लोक संस्कृतिको पत्रकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण दशकौंमा कसरी परिवर्तन भएको छ ? सन् १९५० को दशकमा पत्रकारलाई एक जोकरको रूपमा चित्रित गरिएको थियो जसले बदमासहरूको खेल समाप्त गर्छ र नायिकाहरूको मन जित्छ, तर पछि धूर्त नौटंकी षड्यन्त्रकारी टीआरपी लोभी, एक मूर्ख जोकरको रूपमा।
यो परिवर्तन किन र कसरी आयो ? अक्सर भनिन्छ कि हिन्दी सिनेमामा पहिले जनताको मूड र समाजमा भइरहेको परिवर्तनको गन्ध आउँछ। त्यसैले सन् १९५० र १९६० को दशकको सिनेमा समाजवादी थियो। सन् १९७० को दशकमा पत्रकारहरु पपुलिस्ट बने र आर्थिक सुधारपछिको अवधिमा उनीहरु धनीको अनुत्तरदायी सहरी आडमा परे।
लकडाउनका दिनमा दुइटा घटना हुँदा यो विचार आयो । एउटा, हामीले पहिलो पटक हाम्रो घरमा स्मार्ट टिभी खरिद गर्यौं र दोस्रो, हामीले ओटीटी प्लेटफर्म प्रयोग गर्न थाल्यौं। हामीले सामान्य टेलिश्रृङ्खलाहरू हेर्ने बाहेक १९५० र १९६० को दशकका क्लासिक फिल्महरू हेरेका थियौं, जुन हामीले अहिलेसम्म हेर्न पाएका थिएनौं वा बाल्यकालमा हेरेको भए पनि सम्झना नै भएन । चलचित्रहरू अनियमित रूपमा वा लोकप्रिय चलचित्र गीतहरूको आधारमा चयन गरिएको थियो जुन धेरै पुस्ताले गुनगुनाउँदै आएको छ ।
सोहीअनुसार मैले छानेको पहिलो फिल्म हो, ‘कालापानी’ सन् १९५८ मा प्रदर्शनमा आएको राज खोसलको फिल्म । यस फिल्म दुई अविस्मरणीय गीत ‘हम बेखुदीमा तुमको पुकारे चले गए’ र ‘अच्छा जी मै हरि चलो मान जाउ न’का कारण छनोट भएको हो । फिल्ममा नायक देवानन्द पत्रकार बनेका छन्, जो रक्कासाको हत्याको झुटो आरोपमा आजीवन कारावास भोगिरहेका आफ्ना बुबालाई सफाई दिन लागिपरेका छन् । उनी बम्बईबाट हैदरावाद पुग्छन् र पुराना अखबार खोज्न पत्रिका कार्यालय पुग्छन्। पत्रकारिताको दृष्टिकोणले यो एउटा चाखलाग्दो मामला हो, किनभने मधुबाला यस पत्रिकामा रिपोर्टरको रूपमा काम गरिरहेकी हुन्छिन्। अब तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि कथा कसरी अगाडि बढ्छ र दुबै पत्रकारले कसरी जित्छन् भनेर ।
देवानन्द सन् १९५६ को गुरुदत्तको निर्देशनमा बनेको फिल्म ‘सीआईडी’मा पनि नायकको भूमिकामा छन्। यो फिल्म पनि ‘ले के पहला पहला प्यार’, ‘जाता कहाँ है दिवाने, सब कुछ यहाँ हे सनम’, ‘कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना’ र ‘आँखों ही आँखों मे इशारा हो गया’ गीतका कारण अमर छ। देवानन्द यो फिल्ममा पत्रकार नभएर एक ईमान्दार सीआइडी इन्स्पेक्टर बनेका छन् र उनी यति निडर भूमिकामा छन् कि आफ्ना कमिश्नरकी छोरी रेशा, जसको भूमिकामा शकीलाले अभिनय गरेकी छिन्, उनको पिछा गर्छन् ।
यसको कहानीको केन्द्रबिन्दुमा एक कुशल सम्पादक हुन्छन्, श्रीवास्तव। उनी धम्की र प्रलोभनलाई अस्वीकार गर्दै माफियाको पछि लागिरहन्छन् । देवानन्दलाई हत्यारा र मास्टरमाइण्डलाई पक्रिने जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ। उनलाई आफ्नो मालिकको ‘रखेल’को भूमिका निभाइरहेकी वहीदा रहमानको सहयोग मिल्छ। अन्त्यमा सत्य र सहासी पत्रकारिताको विजयी हुन्छ।
तेस्रो उदाहरण पनि देवानन्दकै एक फिल्मको छ। सायद, यहाँबाट यो साबित हुन्छ कि म उनको र सचिन देव बर्मनको संगीतको कति ठूलो प्रशंसक हुँ। तर, राज खोसलाको सन् १९५८ को फिल्म ‘सोलहवां साल’, जुन ‘रोम होलिडे’ फिल्मको नक्कल जस्तो लाग्न सक्छ, देवानन्द एक इमान्दर र प्रिय पत्रकार प्राणनाथको भूमिकामा देखिएका छन्। फिल्ममा उनी रेलमा यात्रा गर्दै हेमन्त कुमारको आवाजमा ‘है आपना दिल तो आवारा’ गाउँदै एक युवती (वहीदा रहमान)सँग ठोकिन पुग्छन्। वहीदा आफ्नो परिवारको सबै सम्पत्ति लिएर आफ्नो प्रेमीसँग भाग्दै हुन्छिन्। त्यसपछि कहानी यति राम्रोसँग अघि बढ्छ कि युवती र पत्रकारकै जित हुन्छ।
देवानन्दलाई छोडेर राज कपुर–नरगिसको सन् १९५६ को सुपरहिट फिल्म ‘चोरी चोरी’ मा आए। के आज पनि तपाईं फिल्मका यी गीतहरु गुनगुनाउनु हुन्छ ? - ‘ये रात भीगी भीगी’, ‘जहाँ मै जाती हुँ, वही चले आते हो’, ‘आ जा सनम मधुर चाँदनी मे हम’, ‘पन्छी बनी उड्ती फिरुँ मस्त गगन मे’ आदी ।
नरगीस धनी बुबाकी छोरी हुन्छिन्, जो आफ्नो घरबाट भागेकी छिन्। उनको बुबाले उनलाई खोजेर ल्याउनेलाई निकै ठूलो इनाम दिने घोषणा गर्छन्। राज कपुरले उनलाई खोजेर निकाल्न सफल हुन्छन्। तर, उनी पैसाको पछि लाग्दैनन्। उनले एक बेरोजगार, स्वतन्त्र पत्रकारको भूमिका निभाउँछन् । उनलाई नरगिसको कहानी निकै मन पर्छ, जुन कथा आफ्नो सम्पादकलाई दिएर राम्रो पैसा पाउन सक्छन्। अन्त्यमा के हुन्छ तपाईं सोच्न सक्नुहुन्छ। धन र युवती दुवै राजकै हुन्छ।
यो दशकको एउटा फिल्म हो गुरु दत्तको ‘मिस्टर एन्ड मिसेस ५५’। यो फिल्मको गीत ‘जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी,,,’ सम्झँदा तपाईंले पक्कै पनि यो फिल्मलाई सम्झनुहुनेछ। उसको विषयवस्तु त्यतिबेला निकै सान्दर्भिक थियो वा आजको भाषामा ‘भोक’ भन्न सकिन्छ । त्यो वर्ष हिन्दूहरूलाई सम्बन्धविच्छेदको अधिकार दिइएको थियो। यसको चाखलाग्दो कथा मधुबालाको वरिपरि बुनेको थियो, जसले धनी उत्तराधिकारीको भूमिका खेल्दै थियो र उनको संरक्षक काकी ललिता पवार, जसलाई दूधमा मौरी मानिन्छ। बाँकी फिल्म हेरेर थाहा पाउन सकिन्छ । गुरु दत्तले एक बेरोजगार कार्टुनिस्टको भूमिका निभाएका छन् जो आफ्नो साथी जोनी वाकरको आधारमा बस्छन् र कामको खोजीमा अखबारको कार्यालयमा पुग्छन्, जहाँ जोनी वाकरले फोटोग्राफरको रूपमा काम गर्छन्। मेरो मनपर्ने दृश्य हो, जब ललिता पवार जोनी वाकरको ब्याचलर लुकाउने ठाउँमा पुग्छिन् । गुरुदत्त, उनको वार्डको सम्भावित दुलहा।
‘तिमी जागिर खाँदैनौ, कुनै आम्दानी छैन, तिमीलाई नराम्रो लाग्दैन ?’
‘मेरो शिरमाथि छत छ। म तीन साँझ खाना खान्छु। यो शहरमा कैयौं यस्ता छन्, जो मभन्दा खराब हालतमा छन्।’
पवारलाई अहिलेसम्म रिस उठिसकेको थियो, खासगरि अस्तव्यस्त कोठा र ढोकामा बनेको कार्टुन देखेर। उनी सोध्छिन्, ‘के तिमी कम्युनिष्ट त होइनौ ?’
‘होइन, म कार्टुनिस्ट हुँ’, गुरु दत्त जवाफ दिन्छन् ।
निस्सन्देह कथा, त्यहाँ समाप्त हुन्छ जहाँ यो केहि नाटकसंग समाप्त हुनुपर्छ। प्रेमले पैसामाथि जित निकाल्छ र विशेष गरी पत्रकार अत्यन्त इमानदार छ भन्ने तथ्यलाई देखाइन्छ ।
यसपछि भने परिवर्तन सुरु भएको छ। मैले खोज्दा पनि चार दशकमा यस्ता कुनै फिल्म भटिनँ जसमा पत्रकारलाई मुर्ख, खलनायक र बेवकुफको रुपमा देखाएर उसको मजाक नबनाइएको होस्। उसका लागि गालीको पनि प्रयोग गरिएको छ र गालीहरुलाई ढाक्न ‘बिप’ प्रयोग गरिएको छैन। सन् १९८३ को फिल्म ‘जाने भी दो यारो’मा यस्तो देख्न सकिनेछ, जहाँ पत्रिकाका सम्पादक (भक्ती बर्वे) धनी र भ्रस्ट मानिसहरुको कर्तुत बाहिर निकाल्न दुई अनाडी किसिमका फोटोग्राफर (नसीरुद्दीन शाह र रवि बासवानी)लाई प्रयोग गर्छिन्। तर, अन्त्यमा उनी ती मानिसहरुसँग सम्झौता गरेर ती दुईलाई जेल पठाउँछिन्।
यो परिवर्तनमाथि विचार गर्दा मैले अहिलेका फिल्मबारे आफ्नो अनविज्ञतालाई पनि चिन्न पाएँ। त्यसो त मैले अहिलेका ‘पीपली लाइभ’ र ‘पीके’जस्ता फिल्म पनि हेरेको छु। धेरैजसो फिल्ममा टेलिभिजन पत्रकारहरुलाई मजाक बनाइएको छ। यी फिल्ममा महिला पत्रकारलाई पेश गरिनु ठुलो दुर्भाग्य हो। एक झलक– निर्देशक राजकुमार हिरानीले टेलिभिजन पत्रकारको मजाक बनाउन त्यो प्रेमी चरित्रको कहानी देखाएका छन्, जसलाई अनुश्का शर्माले पर्दामा पेश गरेकी छिन्, जो घरमा उनकै प्यारो साथी हुन्।
यो परिवर्तनलाई बुझ्न मैले ती मानिसहरुसँग कुरा गरें, जो आजको बारेमा जानकारी राख्छन्, विशेषगरी मेरो आफ्नै पूर्वसहकर्मी र सिनेमा विशेषज्ञ कावेरी बामजईसँग। जबदेखी टेलिभिजन पत्रकारिताको सुरुवात भएको छ, तब नै पत्रकारहरुसँग बलिउडको रोमान्स फेरि सुरु भएको मानिन्छ ।
कारगिल युद्धमा आधारित सन् २००४ को फिल्म ‘लक्ष्य’मा प्रीति जिन्टाले पत्रकार बरखा दत्तसँग मिल्ने भूमिका निभाएकी छिन्। तर, पछि त्यसको पतन सुरु भएको छ। अजीज मिर्जाको फिल्म ‘फिर भी दिन है हिन्दुस्तानी’ (सन् २००० मा प्रदर्शित)मा शाहरुख खानले हामीलाई टेलिभिजन च्यानलका एंकर कसरी गडबड गर्छन् भन्ने बताएका छन्। सन् २०२० को ‘पीपली लाइभ’सम्म आइपुग्दा पत्रकारलाई मूर्खतापूर्ण र टीआरपीको लोभी अर्थात्, एक खराब प्रवृत्तिको रुपमा देखाइएको छ।
अब त तपाईं पत्रकारलाई राम्रो छविमा पेश गरिने कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न। अपवादमा ‘स्क्याम १९९२’ जस्ता फिल्ममा खोजी पत्रकार सुचेता दलालको भूमिकाको प्रयोग गरिएको छ। यो सन् १९९२ को समयमा आधारित सिरिज हो। यसमा सुचेताको भूमिका निभाउने निकै प्रतिभाशाली अभिनेत्री श्रेया धनवन्तरी हटस्टारको फिल्म ‘मुम्बई डायरीज’मा टीभी पत्रकारको भूमिकामा छिन्। यो फिल्ममा उनी २६/११ को आतंकवादी हमलालाई कभर गर्छिन् र निकै अनैतिक काम गरिरहेकी देखिन्छिन्। यो फिल्ममा त्यो घटनालाई साम्प्रादायिकताको रंगमा रंग्याएर अतिरञ्जित पारिएको छ।
अनि तपाईंले ‘पाताल लोक’ फिल्म हेर्नुभएको छ ? हामीले लकडाउनको समयमा हेरेका थियौं। यसमा यस्तो सम्पादकलाई देखाइएको छ, जो आफ्नो छवी, तागत र सेक्स अपिलप्रति यति धेरै आशक्त छ कि उसलाई सत्यको कुनै मतलब नै छैन। मेरो विचारमा नेटफ्लिक्स निर्मित राम माधवानीको आगामी फिल्म ‘धमाका’मा एक टेलिभिजन एंकर प्राइम टाइममा फर्किनका लागि ‘बम विस्फोट’को प्रयोग गरेको छ। ‘चक दे’ फिल्ममा पनि मिडियालाई लापरबाह र अनैतिक देखाइएको छ।
‘पा’मा अमिताभ बच्चन एक नेता र बुबाको भूमिकामा मिडियाप्रति आक्रोशित भएको देखिएका छन्। जबकि, हिरानी आफ्नो फिल्म ‘सञ्जु’मा सञ्जय दत्तको जीवनमा मिडियालाई एक मात्र असली खलनायकको रुपमा पेश गरिएको छ। भलै, अन्त्यमा ‘पत्रकार’, ‘आमा’, ‘बहिनी’लाई ‘बधाई’ पनि दिइएको छ। हाम्रो लोकसंस्कृतिमा पत्रकारिता, खासगरी महिला पत्रकारको स्तर सामाजिक सञ्जालमा उनीहरुमाथि भएको निन्दा र हमलाको कारण तल झरेको छ।
अब हामी के गर्न सक्छौं ? यसको जवाफ सन् १९५० को वरपरका फिल्मले दिन सक्छन्।
असल पत्रकारिता संकटको सारथी
समाचार मिडिया किन संकटमा छ र तपाइँ यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ ? तपाईं यो पढ्दै हुनुहुन्छ किनभने तपाईं राम्रो, बौद्धिक र निष्पक्ष पत्रकारिताको कदर गर्नुहुन्छ। यो विश्वासको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौं। तपाईलाई यो पनि थाहा छ कि समाचार मिडियाको अगाडि अभूतपूर्व संकट आएको छ। तपाईलाई मिडियामा भारी तलब कटौती र छटनी को समाचार पनि थाहा हुनेछ। मिडियाको पतनका पछाडि धेरै कारणहरू छन्। तर, राम्रो पत्रकारिताको सही मूल्य राम्रा पाठकहरूले बुझ्न नसकेको एउटा ठूलो कारण हो ।
(-लेखक द प्रिन्टका संस्थापक एवंम् प्रधान सम्पादक हुन् ।)
शेखर गुप्ताबाट थप